RASMI: Man United oo xaqiijisay lambarka uu xiran doono Cristiano Ronaldo… (Miyaa lambarka 7-aad looga siibay Cavani?) – Gool FM
RASMI: Man United oo xaqiijisay lambarka uu xiran doono Cristiano Ronaldo… (Miyaa lambarka 7-aad looga siibay Cavani?)
(Manchester) 02 Sept 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa xaqiijinsay in laacibka reer Portugal ee Cristiano Ronaldo uu xiran doono maaliyadda lambarka 7 -aad ee caanka ah, kaddib markii uu ku soo laabtay garoonka Old Trafford.
Xiddiga reer Portugal ayaa caan ku ahaa maaliyada lambarkan 7 –aad, isaga oo xirtay markii ugu horresay uu ku soo biiray Manchester United, sidaas darteed waxay kooxda xaqiijisay in Ronaldo uu heli doono markale lambarkan.
Lixdii xili ciyaareed ee ugu horreysay ee uu joogay kooxda inta u dhaxeysay 2003 ilaa 2009, Cristiano Ronaldo ayaa saftay 292, waxaana uu dhaliyay 118 gool, isaga oo kula guuleystay kooxda 9 koob oo ay ku jiraan Premier League ah iyo UEFA Champions League.
Sida aan wada ognahay, maaliyadda lambarka 7 –aad, waa lambar gaar ah taariikhda kooxda Manchester United.
Waxaa hore ugu xirtay halyeeyada kooxda sida George Best, Bryan Robson, Eric Cantona iyo David Beckham. Hadda, waxay ku noqday ninkii ka dhaxlay Beckham, ee Cristiano Ronaldo.
Maadaama Cristiano Ronaldo loo qoondeeyay inuu xirto lambarka 7 –aad, El Matador wuxuu u wareegi doonaa lambarka 21-aad, waana isla lambarka uu u xirto xulka qaranka Uruguay.
Si kastaba ha ahaatee, kulanka ugu horreeya ee Man United kaddib fasaxa xulalka, oo uu Ronaldo ku soo laaban karo Old Trafford, ayaa ah ciyaarta Newcastle United ay la ciyaari doonaan Sabtida 11-ka September.
RASMI: Kooxda Barcelona oo ku dhawaaqday bixitaanka Miralem Pjanic